Cryptonite စျေး - အွန်လိုင်း XCN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Cryptonite (XCN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Cryptonite (XCN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Cryptonite ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $61 815.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Cryptonite တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Cryptonite များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CryptoniteXCN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.2CryptoniteXCN သို့ ယူရိုEUR€0.17CryptoniteXCN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.154CryptoniteXCN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.183CryptoniteXCN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.81CryptoniteXCN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.27CryptoniteXCN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč4.47CryptoniteXCN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.75CryptoniteXCN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.268CryptoniteXCN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.28CryptoniteXCN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$4.48CryptoniteXCN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.55CryptoniteXCN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.09CryptoniteXCN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹15.03CryptoniteXCN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.33.83CryptoniteXCN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.275CryptoniteXCN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.303CryptoniteXCN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿6.25CryptoniteXCN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.4CryptoniteXCN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥21.22CryptoniteXCN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩238.22CryptoniteXCN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦77.5CryptoniteXCN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽14.77CryptoniteXCN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴5.55
CryptoniteXCN သို့ BitcoinBTC0.00002 CryptoniteXCN သို့ EthereumETH0.000508 CryptoniteXCN သို့ LitecoinLTC0.00346 CryptoniteXCN သို့ DigitalCashDASH0.00206 CryptoniteXCN သို့ MoneroXMR0.00215 CryptoniteXCN သို့ NxtNXT14.02 CryptoniteXCN သို့ Ethereum ClassicETC0.0287 CryptoniteXCN သို့ DogecoinDOGE57 CryptoniteXCN သို့ ZCashZEC0.00211 CryptoniteXCN သို့ BitsharesBTS7.63 CryptoniteXCN သို့ DigiByteDGB6.9 CryptoniteXCN သို့ RippleXRP0.68 CryptoniteXCN သို့ BitcoinDarkBTCD0.00681 CryptoniteXCN သို့ PeerCoinPPC0.667 CryptoniteXCN သို့ CraigsCoinCRAIG89.99 CryptoniteXCN သို့ BitstakeXBS8.42 CryptoniteXCN သို့ PayCoinXPY3.45 CryptoniteXCN သို့ ProsperCoinPRC24.78 CryptoniteXCN သို့ YbCoinYBC0.000106 CryptoniteXCN သို့ DarkKushDANK63.32 CryptoniteXCN သို့ GiveCoinGIVE427.44 CryptoniteXCN သို့ KoboCoinKOBO44.34 CryptoniteXCN သို့ DarkTokenDT0.185 CryptoniteXCN သို့ CETUS CoinCETI569.91